To Uyenza njani iqela le-WhatsApp kwaye umeme abathathi-nxaxheba ngesiKhokelo!
Sonke sinamathele kwezinye Iqela le-whatsapp, kodwa…Singenza njani iqela le-WhatsApp? Nasi isikhokelo esipheleleyo soku funda ukwenza iqela le-WhatsApp.
1 Amaqela e-WhatsApp
1.1 Yintoni iqela le-WhatsApp?
2 Uyenza njani iqela le-WhatsApp
2.1 1. Ngena kuWhatsApp
2.2 2. Yenza iqela
2.3 3. Khetha abafowunelwa
2.4 4. Yongeza isifundo seqela
2.5 5. Yongeza ifoto yeqela
2.6 6. Qeda iqela
3 Ukudibanisa njani iqela le-WhatsApp
3.1 Mema abathathi-nxaxheba kwiqela le-WhatsApp elinekhonkco
3.2 1. Ngena kuWhatsApp kunye neqela oza kwabelana ngalo
3.3 2. Cofa kwigama leqela
3.4 3. Khetha "ikhonkco lesimemo seqela"
4 Khuthaza iqela le-WhatsApp kwi-grupomania.net
Yintoni iqela le-WhatsApp?
I-Whatsapp sesona sicelo sithandwayo sithandwayo Ehlabathini lonke. Sonke sinayo Uhlelo lokusebenza lweWhatsapp efakwe kwii-smartphones zethu, kwaye ngokuqinisekileyo siyabandakanyeka kwiqela elingaphezulu kwesinye le-WhatsApp. Eyona nto ixhaphakileyo ngamaqela abahlobo, amaqela osapho, amaqela okusebenza ...
Ngokuqinisekileyo ngaphezu kweyodwa uye wacinga ukudala iqela le-WhatsApp kunye nabafowunelwa bakho abaninzi, kodwa awukwenzi oko kuba awazi ukuba ungayenza njani.
Emva koko ndichaza indlela yenza iqela le-whatsapp nabafowunelwa bakho abaliqela.
Uyenza njani iqela le-WhatsApp
Ukudala iqela le-WhatsApp kulula kakhulu. Ukwenza oku, kuya kufuneka ulandele la manyathelo alandelayo:
1. Ngena kuWhatsApp
ukuba yenza iqela le-whatsapp, Faka usetyenziso Whatsapp kwi-smartphone yakho kwaye ucofe kwithebhu "Incoko".
2. Yenza iqela
Nje ukuba ungene ngaphakathi kwithebhu "Incoko"Cofa phezulu kukhetho "Yenza iqela".
3. Khetha abafowunelwa
Ngoku uluhlu lwakho kuWhatsApp luya kuboniswa. Khetha abafowunelwa ofuna ukongeza kwiqela lakho elitsha le-WhatsApp, kwaye ekugqibeleni ucofe "ukulandela".
4. Yongeza isifundo seqela
Isinyathelo esilandelayo kukufaka igama okanye umxholo weqela ofuna ukuyila. Eli gama liya kubonakala kubo bonke abathathi-nxaxheba obongeza kwiqela. Khumbula ukuba isifundo sinomda weempawu ezingama-25 kwaye kuwo ungongeza ii-emoticons.
5. Yongeza ifoto yeqela
Ecaleni komxholo weqela, uya kubona ukuba kukho i-icon yekhamera yemifanekiso. Ukuba ucofa kuyo, unokukhetha phakathi kwezi ndlela zilandelayo ukongeza ifoto kwiqela:
Thatha isithombe (ukuthatha ifoto ngekhamera yakho).
Khetha ifoto (ukukhetha ifoto kwiifoto ezikwi-smartphone yakho).
Khangela i-Intanethi (ukukhangela ifoto kwi-Intanethi).
6. Qeda iqela
Okokugqibela, kuya kufuneka ucofe ku "yenza" ukuze iqela lakho lenziwe kwaye libonakale kubathathi-nxaxheba obongeze kwiqela kuluhlu lwabo lwengxoxo.
Ukuba ulandele la manyathelo ...IMIBUZO! kuba ufumene yenza iqela lakho lokuqala le-WhatsApp.
Ukudibanisa njani iqela le-WhatsApp
Kwizihlandlo ezininzi sifuna yabelana ngeqela leWhatsApp ngomnye wabafowunelwa bethu ukuze ukwazi ukujoyina iqela, kodwa ...Singabelana njani ngeqela le-WhatsApp?
Ukuze wenze oku, kufuneka Mema abafowunelwa okanye abathathi-nxaxheba ngekhonkco leqela le-WhatsApp.
Mema abathathi-nxaxheba kwiqela le-WhatsApp elinekhonkco
Xa usenza iqela leWhatsApp, ungamema abanye abantu ukuba bajoyine iqela elinekhonkco leqela.
Ukwabelana ngekhonkco leqela lakho le-WhatsApp landela la manyathelo:
1. Ngena kuWhatsApp kunye neqela oza kwabelana ngalo
Okokuqala, ngenisa i-WhatsApp kunye neqela olenzileyo kwaye ufuna ukwabelana ngalo.
2. Cofa kwigama leqela
Ukufikelela kwiinketho ezahlukeneyo zeqela, cofa kwigama leqela elingasentla.
3. Khetha "ikhonkco lesimemo seqela"
Cofa kwindawo ethi "ikhonkco lesimemo seqela" kwaye ukhethe enye yeenketho:
yabelana ngekhonkco (kunye ne-WhatsApp okanye ezinye izicelo «whatsapp», «imeyile», «umyalezo» ...).
Khuphela ikhonkco (ukulinamathisela kamva kwenye indawo njengomyalezo, i-imeyile ...).
Ngokulandela la manyathelo uya kuba nakho ukwabelana ngesixhumanisi sesimemo kwiqela olenzileyo kuWhatsApp ukuze abanye abathathi-nxaxheba bakwazi ukujoyina.
Nje ukuba kwenziwe oku, unokwabelana ngekhonkco leqela lakho le-WhatsApp kunye nathi ukulipapasha kwi-grupomania.net ukuze abathathi-nxaxheba abatsha bongezwe.
Khuthaza iqela le-WhatsApp kwi-grupomania.net
Ngokulandela amanyathelo akhankanywe kwesi sikhokelo unako yenza iqela le-WhatsApp kwaye ulipapashe kwiwebhusayithi yethu ucofa apha.